Izindaba - Iqoqo elisha le-Zns - Iqoqo le-Viral Off
Phezulu & ihembe
I-Pant & Skirt
Umsele & Ijackethi
Iqoqo elisha le-Zns - Iqoqo le-Viral Off
Sijabule kakhulu ukuqala uchungechunge lwethu olusha lwe-Viral Off Collection.
Ngalesi sikhathi ikakhulukazi ukuzivikela kuphephile kubaluleke kakhulu. I-Viral Off Collection isebenzisa ubuchwepheshe be-Polygiene ViralOff ® okunikela ngocezu lwesitayela nokukhululeka kokuvikelwa komuntu. I-Viral Off mask ne-sweatshirt yamukelwa ukwenza ukuhleleka okwenziwe ngokwezifiso, isitayela esenziwe ngokwezifiso nombala owenziwe ngokwezifiso.
Ngezikhathi zenoveli iCoronavirus, sibona isidingo esikhulu sokwelashwa ngezindawo zokulwa namagciwane. I-Polygiene yake yaqala engxenyeni yokunakekelwa ngesikhathi kuliwa abakwa-SARS ngo-2004. Ngenxa yesizinda sethu, singakwazi ukusebenzisa izindlela ezidingekayo, amakhono, izindlela, kanye nezinqubo ezidingekayo ukulungiselela ukwethulwa kohlobo lwePolygiene ViralOff® - ubuchwepheshe bokwelashwa kwendwangu .
I-Polygiene ViralOff iwumkhiqizo wokwelashwa kwezindwangu kanye neminye imikhiqizo eyehlisa amagciwane ahlolwe ngo-99% emahoreni amabili.Kuyindlela yokwelashwa ehlala isikhathi eside futhi ehlala njalo. Vumela umkhiqizo uphumule amahora amabili futhi kuhle ukubuya futhi. Ukusebenza okuhle nokusimama, geza kancane, kuphela uma kudingeka.Futhi asithinti isikhumba ngoba asiphazamisi izitshalo zemvelo zesikhumba.
Rm. 1101, Tower 2, Dexin digital industry Building, No. 2008 Jinchang Rd., Yuhang District, 311113 Hangzhou, China
Imikhiqizo Eshisayo - - Ibalazwe - - AMP Ucingo